မနက်ဖြန် ည (၇) နာရီ … တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မည်… – PVTV Myanmar
မနက်ဖြန် ည (၇) နာရီ … တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မည်
စစ်အာဏာရှင်ပြုတ်ကျ​ရေးအတွက်ဦးတည်ပြီး #5MillionChallenge တွင် အင်တိုက်အားတိုက်ပါဝင်ခဲ့လှူဒါန်းခဲ့ကြတဲ့ ပြည်တွင်းပြည်ပကအလှူရှင်များအတွက် ​မေတ္တာတုံ့ပြန် လက်​ဆောင်​ပေးအပ်မယ့် ကံစမ်းမဲ​ဖောက်ပွဲကို မကြာမီကျင်းပမယ့်အ​​ကြောင်း​လေး သတင်း​ကောင်းပါးပါရ​စေ..
OFP page တွင် ယခင်ကြေညာထားတဲ့ ဆရာကြီး ဦးဝင်း​ဖေ၊ ကိုမင်းကိုနိုင်နဲ့ အဆို​တော်ကျား​ပေါက်တို့ရဲ့ အနုပညာလက်ရာ ပန်းချီကားများ အပြင်၊ ကမ္ဘာတဝှမ်းမှာရှိကြတဲ့ မြန်မာ​တွေရဲ့ အမြတ်တနိုးထားရှိတဲ့ပစ္စည်း​လေး​တွေကို ရက်ရက်​ရော​ရော ​လှူဒါန်းဖို့ လာ​ရောက်ကမ်းလှမ်းထားသူ​တွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ဒီထဲကမှ အလျဥ်းသင့်သလို ​ထပ်မံရွေးချယ်ထားတဲ့ လက်​ဆောင်ပစ္စည်း​လေး​တွေက​​တော့
– ပန်းချီချစ်မြတ်နိုးသူ အလှူရှင်တစ်ဦးမှ လှူဒါန်းထားသော နိုင်ငံကျော် ဝါရင့်မင်းသား၊ နာရေးကူညီမှုအသင်း-ရန်ကုန် ၏ ဥက္ကဌ ဦးကျော်သူကိုယ်တိုင်ရေးဆွဲထားတဲ့ ပန်းချီကား
– နွေဦးတော်လှန်ရေးအမှတ်တရလက်ရာများကို တီထွင်ရောင်းချပေးနေသော FCOUP မှ လှူဒါန်းသော Symbol of Revolution necklace နှင့် bracelet များ
– ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည် အသင်း (နယူးဇီလန် ဌာနခွဲ) မှအလှူရှင်တစ်ဦး လှုဒါန်းသော စိန်လက်စွပ်
– Myanmar Nationalities’ Support Organization – JP ရဲ့ အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးမှလှူဒါန်းသော မြန်မာနိုင်ငံမြေပုံ ရွှေလော့ကတ်
– Australia မှ အလှူရှင်တစ်ဦး လှူဒါန်းသော Save Myanmar Handmade နာရီ
အစရှိတဲ့ တော်လှန်ရေးအတွက် အဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ တုံ့ပြန်လက်ဆောင် အမှတ်တရ ပစ္စည်းလေးတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကံစမ်းမဲဖောက်ပွဲကို ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် DAUNG – ဒေါင်း နဲ့ သရုပ်ဆောင် Myat Noe Aye – မြတ်နိုးအေး တို့က Facebook Live အစီအစဥ်အဖြစ် တင်ဆက်ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပြင် Ministry of Defence – National Unity Government of Myanmar ဝန်ကြီး ဦးရည်မွန်၊ ကို Min Ko Naing တို့နဲ့အတူ5Million Challenge မှာ အားသွန်ခွန်စိုက် ဝိုင်းဝန်းလုပ်ကိုင်ခဲ့ကြတဲ့ ရံပုံငွေရှာဖွေရေးအဖွဲ့ဝင်အချို့လဲ တက်ရောက်မှာဖြစ်ပြီး၊ ကံစမ်းမဲလက်မှတ်များ နှိုက်ထုတ်ရွေးချယ်ပေးဖို့ နိုင်ငံ​ကျော်အဆို​တော် Kyar Pauk အား အထူးဧည့်သည်​တော်အ​နေနဲ့ ဖိတ်ကြားထားပါတယ်။
ဒီအစီအစဉ်ကို စက်တင်ဘာလ ၅ ရက်နေ့ (5-9-2021) တနင်္ဂနွေနေ့ ည ၇နာရီ (မြန်မာနိုင်ငံစံတော်ချိန်) မှာ CRPH-OFP Page မှနေ၍ Live ထုတ်လွှင့်ပြသပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် အလှူရှင်​တွေ​အ​နေနဲ့ မိမိတို့ဝယ်ယူလှူဒါန်းထားတဲ့လက်မှတ်​လေး​တွေ ကံထူးမယ့်စာရင်းထဲပါမှာလားဆိုတာ ရင်ခုန်စွာ​စောင့်စားကြည့်ရှုကြပါလို့
Like – 18K Share – 1249
2021-09-04 at 10:51 PM
ကျ​တော်သာ ဆုတစ်ခုခု​ပေါက်ခဲ့လျှင် အဲဒိဆုကို​လေလံတင်ပြီးရသမျှအလှူ​ငွေကို PDF ​တွေထံပြန်လှူသွားမယ်။
Kyaw Win Naing says:
လှူကတည်းကတော့ စိတ်အရှင်းနဲ့ပါပဲ။ သို့ပေသိ
လက်ဆောင်လေးတွေကို မြတ်နိုးမိတော့ မက်မိသား ❤️
Knu Kayin says:
2021-09-04 at 11:23 PM
အမှတ်တရလေးတော့ လိုခြင်မိတယ် ။ လိုခြင်လို့ လှူတန်းတာ မဟုတ် ။
2021-09-04 at 11:26 PM
Roughly 1 in 50000 chance to win ! The top luckiest ones will get chance to win only 😅. But very hapapy the target reached ! 💪🏻💪🏻💪🏻💪🏻💪🏻
2021-09-05 at 12:26 AM
ယုံကြည်ရာခြေလှမ်းများအတွက် မှ ဆုလက်ဆောင် တစ်ခုခု​ပေါက်ခဲ့လျှင် အဲဒိဆုကို​လေလံတင်ပြီးရသမျှအလှူ​ငွေကို PDF ​တွေထံပြန်လှူသွားမယ်။
Khin Sandar Nay says:
2021-09-05 at 6:47 AM
Eint Hmu Chal says:
ဘာမှမ​ပေါက်လဲ​ကျေနပ်ပါတယ် အစကတည်းက လှူဖို့သက်သက်ပါ
Paing OO Thet Thet says:
လိုအပ်တာ NUG ကနေ ထိထိရောက်ရောက် PDF လေးတွေကိုကာကွယ်ပြီ အာဏာရှင်ကို အမြန်ဆုံးချေမှုန်း ပေးဖို့ဘဲ့လိုအပ်ပြီ ကျန်တာ စိတ်မဝင်စားတော့ဘူး ကျမတို့ဖက်က နောက်နှေးလေ သူတို့ဖက်က လှုပ်ရှားရင်း ပေးဆပ်နေရတဲ ကလေးတွေများနေပြီ မြို့ရွာအခြေနေ ပြည်သူတွေရဲ့ဘဝလဲ နေ့လဲမလုံ ညလဲမလုံခြုံ ဘဝရောက်နေပြီ အာဏာရှင်ကိုထိထိရောက်ရောက် တော်လှန်မဲ့ အချ်န်ကို အမြန်ဆုံးလိုခြင်ပြီ
2021-09-05 at 10:06 AM
အခုခိ်န္မွာ NUG ကေန အျမတ္ဆံုး လက္နတ္ ထုပ္ေပးပါ
2021-09-05 at 10:11 AM
Ei Ei Myo says:
အရင္ကေတာ့ မဲကိုစိတ္မဝင္စားဘူး လႉခ်င္စိတ္တခုထဲနဲ႔ပဲဝယ္တာ
ဒါေပမဲ့ခုက် ေပါက္ခ်င္မိတယ္ ေလ လံတင္ပီးရတာအကုန္လႉခ်င္လို႔
Ko Thant Myanmar says:
2021-09-05 at 10:42 AM
နှစ်စောင် အားပေးထားတယ် လေ
2021-09-05 at 11:16 AM
ရရင်လည်း လေလံတင်ပီး ပြန်လှူမယ်
2021-09-05 at 11:27 AM
ဘယ်သူဘဲရရ ဝမ်းသာပါတယ် ပြည်သူမှ ပြည်သူသို့ ဆိုတာ ဒါပါဘဲ ဝမ်းသာကြည်နူးရပါတယ်
La Minn Lay says:
2021-09-05 at 11:51 AM
ဒုန်း…ဒုန်း…ဒုန်း…ဘယ်သူရ ရ ၀မ်းသာတယ် ရင်ခုန်တယ် စောင့်ကြည့်နေမယ် 😘
Kaw Ram says:
2021-09-05 at 12:35 PM
Lin Lin Yone says:
2021-09-05 at 1:27 PM
Wutyi Nyein says:
2021-09-05 at 2:17 PM
Kwee Kyaw says:
2021-09-05 at 3:42 PM
Pyae Phyopaing says:
2021-09-05 at 5:46 PM
Khm Yint says:
2021-09-05 at 6:28 PM
ကျမသာ ဆုတစ်ခုခု​ပေါက်ခဲ့လျှင် အဲဒိဆုကို​လေလံတင်ပြီးရသမျှအလှူ​ငွေကို PDF ​တွေထံပြန်လှူသွားမယ်။
Sunthi Tun Zawlin says:
Maw Han says:
2021-09-06 at 1:29 PM
2021-09-07 at 10:31 PM